Namuhla computer kanye ne-software sphere ayakhula ngokushesha, kukhona eziningi zokuphepha eliphezulu, okuningi kuqhame welithi "umncintiswano". Kudala ke yazibiza Linux inkampani enkulu yangasese, okuyinto umxhwele OS abasebenzisi bomsebenzi wabo futhi indlela ngamunye, ngokugcizelela kakhulu nesincintisana esinamandla Windows ethandwa. Nokho, i-Linux Wabasaqalayo ngokuya ekuthuthukiseni a engavamile ngokwanele futhi kubenzima, yingakho-ke namanje engazange wawina uthando emhlabeni. Kodwa inkinga akuncikile yinkimbinkimbi uhlelo, futhi umkhuba kwethu Vindous - nzima kithi pereadaptirovatsya eyodwa-eksisi kwenye. Noma kunjalo, abaningi ngenkuthalo sicabanga ukuthi ukukhetha PC yakho ye-Linux?
Phakathi nesibalo esikhulu izinguqulo futhi ezahlukeneyo manje ziqokonyiswe amane kuphela, okuyinto kubangelwa eningi okuhle futhi ezingeni lelisetulu technical support. Sikhuluma Ubuntu, Mint, Fedora futhi openSUSE. Yikuphi Linux kungcono? Lo mbuzo alisasebenzi, ngoba zonke izici eliyingqayizivele futhi umehluko omkhulu, okuyizinto elula umsebenzisi walesi noma ukuthi mkhakha womsebenzi (plus izintandokazi ku design futhi interface yomsebenzisi).
Yikuphi Linux ukukhetha, uma usheshe ugxila umbandela we "Ideskithophu" futhi lula yayo? Ethandwa kakhulu phakathi abasebenzisi kubhekwa uhlelo nge GNOME esibonakalayo. Nokwabiwa kokusetshenziswa kubonwa esekelwe Imisebenzi Uhlolojikelele, lapho ungakwazi ukufinyelela kusuka iphuzu elilodwa ukuze wonke amawindi kanye nezicelo. Uhlelo kabusha ngokuphelele, okuvumela yimuphi umsebenzisi ukuzivumelanisa ngokuphelele kwemisebenzi yabo isimo sokungaxhumani, futhi ku-intanethi. GNOME kuphela efika kuqala ukuba into entsha kubasebenzisi Vindous, kodwa yonke into icacile futhi etholakala kwamahora ambalwa. Kulesi umsebenzi wokusabalalisa Ubuntu, Mint futhi Fedora. Kuyaphawuleka ukuthi izinguqulo ezihlukene GNOME kuzodinga izindleko ezahlukene - nesikhathi, ngisho impahla.
Ngokwesibonelo, ethandwa kakhulu isikhathi eside wasebenzisa 2.x GNOME, kodwa Fedora isivele esekelwe version wasithathu, umhla iyokwehluka imvelo inselele ngaphezulu nje, ngokungafani cishe yonke into phezu eyodwa wangaphambilini, kodwa izodinga ihluzo ikhadi ngobuchwepheshe ngakuthathu (nakuba uhlelo isetshenziswa kahle lithathelwe) -, ngakho-non-ukugcwaliseka umbandela, zokubuyela emuva kuhlanganisiwe. By the way, esibonakalayo iyona ungakhululekile kakhulu.
Mint, ngokungafani kuya uzakwabo ngenhla echazwe, kukuvumela ukhethe kusuka ukuhlukahluka eziningana base ngokwalo, ikakhulukazi: GNOME 3.2, MGSE futhi WOMSHADO (GNOME 2.32 legatsha). Ziyahlukahluka ngokuyinhloko, Nokho, kukhona njalo ukhetho ulungise yokuthi evumelana nawe.
Ubuntu, eqinisweni, uhlelo elula kakhulu futhi kuyaqondakala of real, ngaphandle ezinkingeni ezengeziwe. Kungenzeka, uma unqume nje ukuze ujike emgqeni kohlelo futhi sizibuza ukuthi kazi ukukhetha Linux, ukukhetha kuyokwehlela kulo. Lapha izici jikelele kokusetshenziswa kubonwa, isicelo main into engadingekile noma engaziwa. Wabasaqalayo - umuntu kangcono Abasebenzisi be-Linux.
Uma wabheka e isiqondiso openSUSE, ngalesosikhathi you azi ukuthi uhlelo lusebenza kwi-KDE ukusatshalaliswa, lapho element central esikhundleni Imisebenzi Uhlolojikelele ngeke zokusebenzela. Ngizothi kusukela isipiliyoni sami siqu ukuthi umsebenzi uhlelo elula kakhulu, okuyinto ngokushesha okuningi kunalokho "amaqabane 'yabo, ne interface yomsebenzisi-friendly futhi isicelo omuhle ngokubambisana.
Yikuphi Linux ukukhetha lenzela amaphakethe enikeziwe in the ukusatshalaliswa futhi adambise lokuthola nokufaka enye isofthiwe? Umbuzo othakazelisayo lowo, kodwa hhayi eliyinkimbinkimbi. Zonke izinhlelo, isimiso, babe izici ejwayelekile, kodwa kuya-search okulula kakhulu uhlelo kanye ukufakwa okwalandela izinhlelo ezihlukahlukene, eqinisweni, Ubuntu, ngakho Wabasaqalayo waphinda bazincome.
Uma kuziwa nokuqokwa uhlelo, okungukuthi umsebenzi noma nje yokuchitha isizungu, ungakwazi ukusho lokhu: Ubuntu - Wabasaqalayo, Mint - kubasebenzisi ethuthukile, futhi Fedora futhi openSUSE - konjiniyela yangempela (nakuba kancane ngemuva odlule amabili).
Ukuze ufunde indlela ukubonisa amafolda afihlekile "Mac" uhlelo
Yini ukupheka eyodla - ezimbalwa ongakhetha kuyashesha futhi kulula
Pie ne plums. A zokupheka ezimbalwa ezilula
My pet - Newt ezivamile
Amasele emanzini: Incazelo nemibandela yeziboshwa
Isitayela enqoleni: igqoka jini bonke izikhathi
Chivalry: Impi Medieval: Ukubuyekeza, idethi, izidingo zohlelo
Holy cross Andreya Pervozvannogo: Umlando
Kungani iphupho anyanisi? Kanjani ukuqonda leliphupho?
Yevgeny Bazarov isithombe umlingisi losemcoka, Bazarov sengqondo kwabanye
Indlela yokubhaka ihansi ehhavini: imithetho emithathu eyisisekelo kanye neresiphi Yonyaka Omusha
Ngingaba uhlanze impumulo "furatsilina": imfundo kanye impendulo